पौष्टिक आहार र स्वस्थ जीवनशैली कसरि अपनाउने – Ghar ko Doctor
Home » Health Tips » पौष्टिक आहार र स्वस्थ जीवनशैली कसरि अपनाउने
सरल रुपमा पौष्टिक आहार र स्वस्थ जीवनशैली कसरि अपनाउने?
तपाईले आफ्नो र आफ्ना घर परिवारको पौष्टिक आहारको बिषयमा ध्यान दिने गर्नु भएको छ? कतै आफ्नो दैनिक नित्यकर्मको व्यस्तताका कारणले लापरवाही त गरिराख्नु भएको छैन? विभिन्न रोग र कमजोरीको मुख्य कारण हो हाम्रो शरीरमा हामीलाई चाहिने पोषण युक्त खानपानको कमि। साथै हाम्रो खानपान अत्तान्त्य सफा हुन पनि उत्तिकै आबस्यक हुने गर्दछ। हामीले घरमै बसेर सरल र सुपथ मुल्यमा पौष्टिक आहारको उपभोग गर्ने उपाए जान्नका लागि तल दिएका बुदाहरु ध्यान दिएर नियल्नुस होला:
क: पर्याप्त पनि, हरियो सागपात र फलफूलको नियमित उपभोग
तपाईलाई थाहाछ World Health Organization का अनुसार करिब ७० kg तौल भएको व्यक्तिले दिनमा ३ Ltr. पानि पिउनु पर्दछ? पानीले हाम्रो शरीरको अनावश्यक तत्व बाहिर निकाल्न, शरीरमा तातोपना कायम राख्न र हामीले खाएका पौष्टिक तत्व शरीरको विभिन्न भागमा पुर्‍याउन मदत गर्दछ। सबै भन्दा महत्तोपुर्ण कुरा भनेको सफा पनि पिउनु हो। तपाइले फिल्टर गरेको अथवा उमालेको पनि मात्रै पिउनु होला ।
साथै तपाइले दैनिक रुपमा कम्तीमा पनि एक वा दुईवटा फलफूल खान स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। सीजन अनुसारका फलफूलमा अनेकन भिटामिन र हाम्रो शरीरमा आवश्यक पौष्टिक तत्व हुन्छ। र हरियो सागपात र तरकारीमा क्याल्सियम हुन्छ जसले हाम्रो हाडजोर्नी र दात लाइ मजबुत बनाउछ। साथै हरियो तरिकारी मा हाम्रो शरीरलाइ चाहिने उचित मात्रामा भिटामिन A , भिटामिन C , र पोटासियम पनि पाइन्छ।
ख:कार्बोहाइडेट कम, फाइबरयुक्त खाना बढी
कार्बोहाइडेट र उच्च क्यालोरीयुक्त खानेकुराले मोटोपनाको समस्या, मधुमेह, चिल्लोपना बढ्ने, उच्च रक्तचापजस्ता जस्ता विभिन्न जटिलता उत्पन्न गरौछ। कार्बोहाइडेट कम गरेर हामीले फाइबरयुक्त खानेकुरा जस्तैः गहुँको रोटी, कोदो, फापर, सागपात, फलफुल, दाल गेडागुडी दिनहुँ खानामा समावेश गर्नुपर्छ।  हाम्रो शरीरलाई सामान्यतया २० देखि २५ ग्रामसम्म फाइबर आवश्यक हुन्छ जसले हाम्रो सरिर्को पाचन शक्ति लै मजबुत बनाउने काम गर्छ र हामीलाई स्वस्थ राख्छ।
ग: बदाम, काजु र दुध:
बदाममा फाइबर, प्रोटिन, म्याग्नेसियम, र भिटामिन E पाइन्छ। येसैगरि,काजुमा रोग संग लड्न सक्ने क्षमताको ब्रिद्दि, एबम भिटामिन, मिनारल्स, साथै हाम्रो आखा, छाला र मुटुलाई पनि लाभ्दाई हुन्छ। र दुध मा शरीरको लागि अति आवश्यक पोटासियम, क्याल्सियम, प्रोटिन पर्याप्त रुपमा पाइन्छ।
घ: दैनिक ब्याम र स्वस्थ जीवनशैली:
हामीले सेवन गरेका पौष्टिक आहारले मात्रै पुग्दैन। स्वस्थ रहनका लागि दैनिक रुपमा ब्याम गर्न आवश्यक छ।
साथै, पर्याप्त निन्द्राले हाम्रो शरीरका सबै आहारलाई पचाएर त्यसमा रहेका पोषण अबशोषित गर्न मदत गर्छ। र हामीले बिस्तारै चपाएर खानुपर्छ, जसले गर्दा खानेकुरामा रहेको पोषक तत्व शरीरले राम्ररी लिन्छ। हामीलाई जतिसुकै भोक लागेपनि तीन भागको एक भाग पेट खाली राख्नुपर्छ, जसमा वायु रहन्छ र जसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई सहज बनाइदिन्छ ।
← के महिलाको यौ-न ह’र्मोनले पुरुषलाई कोरोनाबाट जोगाउला?
गर्भवती अवस्थामा महिलाले गर्नै नहुने यी १३ गल्तिहरु →